Kumuka kwemhepo. Nhetembo Anthology, naJuan Ramón Torregrosa | Zvazvino Zvinyorwa
Kumuka kwemhepo. Nhetembo anthology.
Kumuka kwemhepo. Nhetembo anthology, ibhuku rekuunganidza renhetembo dzakaitwa nevanyori vakasiyana munhoroondo yese. Yakaburitswa sedhisiki dhairekitori kekutanga muna 2002 naWedhiyo Vicens Vives, naJuan Ramón Torregrosa semupepeti Mifananidzo yacho inoenderana naJesús Gabán.
Zvinoenderana neyekunyora portal Mwedzi Miguel (2019), "iro bhuku rinotarisira kuti iwe utore rwendo rwekufungidzira paunosangana nedzimwe tsika, nyika dzisingazivikanwe uye nzvimbo dzisingafungidzike". Rwendo rwakadai rwepamoyo uye runonakidza runogona kungobviswa nepeni yevananyanduri vepasirose.
1 Nezve mupepeti, Juan Ramón Torregrosa
1.1 Mamwe mabhuku akatanhamara aJuan Ramón Torregrosa
2 Kuongorora kweThe Wind Rose. Nhetembo anthology
2.1 Iko kukoshesa kukuru kweiyo Torregrosa anthology
3.2 Kufamba shuwa, kurota kwerusununguko
3.2.1 «Mamepu», naConcha Méndez
3.2.2 "Tasva pagungwa", naRafael Alberti
3.2.3 «Teregirafu inonamira», naCelia Viñas y Pato, naBlas de Otero
3.2.4 "Adolescence", naJuan Ramón Jiménez naCanción del pirata, naJosé de Espronceda
3.3 Dzimwe nyika, vamwe vanhu
3.3.1 Hunhu nehunhu
3.3.2 Mhinduro dzechisikigo nesango rekongiri
3.4 Muhumambo hwerudo
3.4.1 Epithets nemwaka
3.4.2 Rudo munhetembo dzechivanhu
3.4.3 Mutauro wemanzwiro
3.5 Ngatifambei takabatana maoko
3.5.1 Zvemweya uye zvakasikwa kukosha
3.5.2 Society, ushamwari uye tsitsi
3.5.3 Mazita semidziyo yekutaura muzvinangwa zvakasiyana
3.6 Kufamba kuburikidza nemasikirwo
3.7 Munyika dzehunyanzvi nekusetsa
3.7.1 Nyaya yekugadzira
3.8 Panzira yezviroto uye zvakavanzika
Nezve mupepeti, Juan Ramón Torregrosa
Juan Ramón Torregrosa akazvarwa muna 1955 mu Guardamar del Segura (Alicante), Spain. Akapedza degree neSpanish Philology kubva kuAutonomous University yeBarcelona. Kubva 1979 akashanda semudzidzisi wepachikoro chesekondari; Parizvino anoshanda kuES Chiremba Balmis muAlicante. Pamusoro pezvo, akashanda semubati-director weiyo Nhetembo Kirasi kuYunivhesiti yeAlicante pakati pa1999 na2005.
Akatungamira zvakare edhisheni edhisheni yaBenjamín Jarnés (Mutsara wako wemoto, Bécquer (Ngano nenziyo) naAlejandro Casona (Yedu Natacha). Mabasa ake ekutanga anozivikanwa anobva muna 1975, mazhinji acho anga ari mabhuku enhetembo uye nhetembo. Akagadzira zvakare kugadziriswa kwevechidiki kwenyaya yaDickens, Nhoroondo yemaguta maviri.
Mamwe mabhuku akatanhamara aJuan Ramón Torregrosa
Dziva rekatatu (1975). Bhuku renhetembo.
Siesta zuva (1996). Bhuku renhetembo.
Mwaka mina. Kukokwa kunhetembo (1999). Nhetembo yevana anthology.
Rukova rwakajeka, tsime rakadzikama (2000). Nhetembo yevana anthology.
Nhasi iwo maruva ebhuruu. Tsika yemuromo mune vadetembi ve27 (2007). Nhetembo yevana anthology.
Mangwana huchave huchi (2007). Anthology yevechidiki nhetembo.
Kusurukirwa (2008). Bhuku renhetembo.
Konzati yezvipesana (2017). Bhuku renhetembo.
Analysis of Kumuka kwemhepo. Nhetembo anthology
Zvinyorwa zvazvino zveanthology zvinosanganisira zvinotsanangudza kana kujekesa manotsi pamwe neapendikisi yezvikamu zvekuongorora nhetembo. Ehezve, kuve fananidzo, mhando yekunyora, mazwi uye rondedzero maitiro anosiyana zvinoenderana nemunyori akashanda. Uye zvakare, mifananidzo yaJesús Gabán inoumba mukwanisi wakakwana wekuona musimboti wetsamba dzakadzidzwa.
Iko kukoshesa kukuru kweiyo Torregrosa anthology
Juan Ramón Torregrosa akaita sarudzo ine hungwaru yevanyori nhetembo dzakabatanidzwa muanthology yake maererano nemusoro wenyaya. Pane imwe nzira irinani yekukurudzira kuzvitsvaga muvechidiki pane nevakangwara saNeruda kana Gómez de la Serna? Kunyangwe zvisingazivikanwe zvinyorwa zvinogona kunge kana kutonyanya kukwezva zvichienzaniswa neizvo zvakagadzirwa nevanyanduri vanozivikanwa kwazvo.
Saizvozvo, Kumuka kwemhepo inokwanisa kuunza kukosha kwakanyanya pakati pevaverengi vasina kujairika. Kunyangwe zvainangana nevateereri vevana, kuverenga bhuku iri kunonakidza kwazvo kune vateereri veese mazera. Kunyangwe iri bhuku rine chinangwa chakajeka chekudzidzisa, chimiro chayo chinogona kuve chinonakidza kune avo vaverengi vane shungu nezve nhetembo.
Juan Ramón Torregrosa anopa nhetembo dzakarongwa kuita madingindira manomwe. Vanyori vakadai saRubén Darío, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Bécquer, Juan Ramon Jimenez kana Federico García Lorca, zvinotsanangurwa mumusoro unopfuura mumwe chete. Mudetembo rega rega, mupepeti anonongedza zviitiko kuitira kujekesa zvinangwa nemanzwiro emunyori. Nenzira imwecheteyo, izvi zvikamu zvinogonesa kunzwisiswa kwezvinyorwa zvekushandisa zvinoshandiswa.
Ruben Dario. Chikamu chevanyanduri mune anthology.
Torregrosa mapoka ekutanga, anopatsanura nhetembo mbiri dzekutanga dzakakomberedza hukama pakati pababa nemwanakomana (a). Nhetembo yekutanga yakaongororwa ndeye "Rueda que irás muy mucho", naMiguel Hernández. Musimboti wekukurudzira kwekunyora uku kuzvipira kunonzwa baba kumwanakomana wavo. Mupepeti anobvunza vaverengi vake nezvenzira dzinoshandiswa ne protagonist kudaidza mwanakomana wake, mhando yemazwi anoshandiswa uye zvishuwo zvakafungidzirwa.
Nhetembo yechipiri "Margarita Debayle", naRubén Darío. Nguva ino, Torregrosa anosimbisa rudo rwekunaka uye runako runomutswa mudetembi nemusikana akatsanangurwa munyaya. Mibvunzo yakapihwa inotsvaga kufambisa dudziro yezviverengero, zvirevo uye gudziramukanwa. Zvimwechetezvo, chinamato nechinamato chemweya chinotsanangurwa sechinhu chakakosha pakuvhara nhetembo.
Kufamba shuwa, kurota kwerusununguko
Muboka iri renhetembo, Torregrosa anounza pamberi maonero akasiyana evanyanduri vakanyora nezvenzendo nekutiza. Zviripachena, idzi idetembo dzine musimboti wadzo pachadzo unopfuura kudarika kutamisirwa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe munhu. Muzvokwadi, inotaura nezveganhuriro, majeri, rusununguko, kutya, kushinga, nzendo dzinopfuura nzvimbo isingazivikanwe ... Zvese zviri mupfungwa dzemunyori nemuverengi.
«Mamepu», naConcha Méndez
Torregrosa anobvunza vaverengi nezvekunzwa kunotapurwa ne protagonist paanotarisa kumamepu. Saizvozvowo, mupepeti anonzwisisa kuti mamiriro acho ezvinhu akakodzera kupindira mune zvakajairika maitiro ekuyaruka. Pakati pavo, chishuwo chekunzvenga kana kupukunyuka kubva mumamiriro ezvinhu (kana kubva ivo pachavo). Neichi chikonzero, mepu inogona kureva panguva imwechete chinetso chakatarisana neushingi kana kutya kwekutarisana nenzvimbo dzisingazivikanwe.
"Tasva pagungwa", naRafael Alberti
Zviripachena, mazwi e Raphael Alberto zvinoratidza rudo rwake kugungwa. Nekudaro, iwo mahora mahombe uye simba ravo risingakundiki rinomutsa kunzwa kwerusununguko, simba, njodzi, kana kukurudzira. Zvese zvinopesana zvinoshanda munzvimbo dzawo. Akanaka, asingachinjiki, anodzikamisa uye ane dutu; gungwa reAlberti rinounzwa naTorregrosa sechiitwa chekuregedza fungidziro ichibhururuka, chaizvo.
Juan Ramón Jiménez. Chikamu chevanyanduri mune anthology.
«Iyo telegraph inonamira», naCelia Viñas uye repenaBlas de Otero
Kutaura kwevanyanduri vaviri kuri pachena kuburikidza nechitima uye nhare yeteregirafu. Torregrosa anoshandisa zvese zvinyorwa kutsanangura kuti mufaro wekufamba unogona kubva sei mumamiriro akasiyana mumunhu mumwe nemumwe. Panyaya iyi, mupepeti anosimbisa kodzero yerusununguko rwevanhu uye chinangwa chekubvisa miganhu. Pfungwa dzinoratidzwa nenzira yakajeka naBlas de Otero.
«Adolescencia», naJuan Ramón Jiménez uye Pirate rwiyonaJosé de Espronceda
Pamwe, nhetembo yaJiménez ndicho chinyorwa cha Kumuka kwemhepo nevaverengi vadiki vanonzwa zvakanyanya kuzivikanwa. Nei mwana ari kuyaruka achida kusiya dhorobha rake? Rudo runorema zvakadii pasarudzo dzakaitwa? Uyu wekupedzisira mubvunzo zvakare ndiwo wepakati dingindira raJosé de Espronceda munhetembo yake yemhando yepamusoro yemimhanzi kudakadza kutaura.
Dzimwe nyika, vamwe vanhu
"Nhema Kusviba", naJorge Artel, inotsanangura runako runoshamisa rwemukadzi ane Afro-dzinza genotypic nhaka. Torregrosa inosimbisa iyo nzira iyo Artel inosimbisa yakanakisa maficha eiyo museve wake nenyanga dzenzou kunyemwerera uye ebony ganda. Saizvozvowo, nhetembo «Saga», naAramís Quintero inoongororwa naTorregrosa kuratidza mashandisirwo chaiwo ezvipikisheni pakumutsa pfungwa dzekunzwa.
Mhinduro dzechisikigo nesango rekongiri
Panyaya iyi, mupepeti anoenderera mberi nekudzidza kwemazita anoshandiswa kutsanangura zvakasikwa mu "Magred", naFrancisco Brines. Mukupesana, Torregrosa anoenderera mberi munhetembo inotevera -The Aurora, naFederico García Lorca - kuongorora nhoroondo dzevanoona nezveguta rakashatiswa (New York). Mifananidzo isina musoro iyi yakatsanangurwa kutsvaga mazwi anoratidza husiku, mhirizhonga, kushushikana uye kufa.
Juan Ramón Jiménez anoonekwa zvakare mune yekunyora nhetembo naiye Chitubu mangwanani. Pane ino chiitiko, Torregrosa anobvunza vateereri nezvezvikonzero zvemunyori zvekusarudza maruva emangwanani aApril senzira yekuratidza mufaro wake. Saizvozvowo, mu "Rimas" naGustavo Adolfo Bécquer, mupepeti anoongorora mabhariki emetric enhoroondo inonakidza achireva matanho akasiyana erudo: kunyepedzera, kuda uye kutadza.
Zvimwechetezvo, Torregrosa anokumbira vaverengi kuti vanyore yavo yepamoyo chiitiko chakafanana neicho chakatorwa naÁngela Figuera mudetembo rake "Autumn". Saizvozvowo, ne "Frutos del amor" naAntonio Carvajal, madimikira enziyo akakomberedza madimikira ane rudo akavakirwa pane zvakasikwa anoongororwa.
Rudo munhetembo dzechivanhu
En Soleares, Seguidillas nedzimwe ndima naManuel Machado tarisa pane echinyakare metric zvivakwa. Mukuziva kwemupepeti, basa raMachado rinomiririra mukana wakakwana kuti unzwisise rwiyo rwemazwi pamwe nezvisinganzwisisike kana kunyangwe ndima. Kunyangwe mundima, Seguidillas kana soleas.
Uye zvakare, Torregrosa inopa zviitiko zvekuona madimikira munhetembo «Rima», naBécquer uye nemhando yechinyakare metric mumadetembo maviri asingazivikanwe. Mune yekutanga, "Rudo rune simba kupfuura rufu" (asingazivikanwe), munyori akasanganisa manzwiro ekurega basa uye tariro. Wechipiri wavo ndi "El romance de la condesita", iine yayo 134 octosyllabic mitsara yeacute assonance rhyme mune ayo kunyange mavhesi.
Paanotaura nezve "Mambokadzi", naPablo Neruda, Torregrosa anoisa chiitiko chekuzviisa pasi chemudiwa mumaonero. Wobva wabvunza vaverengi kana vakatarisa neicho chifukidziro chinogadzira chitarisiko nemasaini eanodakadza. Panguva imwecheteyo, mupepeti anotsanangura achishandisa "Kudya kwekuseni" (naLuis Alberto Cuenca) kuti mutauro wakajairika unonyatsoshanda munhetembo. Duramazwi rakaomarara uye / kana rakajeka harina kukosha.
Ngatifambei takabatana maoko
Zvemweya uye zvakasikwa kukosha
Mu "Gumbo rerunyararo", rakanyorwa naJuan Rejano, Torregrosa anoomerera pakukosha kwezviverengero zvekunyepedzera zvemhando yefoni. Ndokureva, izvo zvine mutsindo zvakawanikwa kuburikidza neyakafanana uye inodzokororwa chimiro ichiratidzira nezvehucheche, mitambo, hondo nerunyararo. Nenzira imwecheteyo, mupepeti anotaurira Neruda "Ode to Sadness" kuratidza hukama hwakagadzwa nanyanduri pakati pemhuka "dzakasviba" nekutambudzika kwadzo.
Zvisinei nekunzwa kwakasuruvara, Neruda akatora mamwe mavhesi ane tariro mune iri basa, nekuti anonzwisisa kusuwa sechinhu chechisikigo pakunamata. Saizvozvo, Blas de Otero anoongorora dingindira rekutenda muna Mwari uye muvanhu munhetembo yake "Muhuwandu hwakawanda." Mune pfungwa yemupepeti, kunyora kwaOtero kunofarira kuongororwa kwemisoro yemweya (chitendero, kuvimba, hunhu uye simba remukati).
Society, ushamwari uye tsitsi
Nhetembo «Bares», yakanyorwa naNicolás Guillén, inosvikirwa naTorregrosa kuti vaongorore mutauro unoshandiswa nevanhu vashoma-mataundi mumatavern. Naizvozvo, zvinomutsa mibvunzo nezve typology yevatambi uye nekumhanyisa kufamba kweguta semumwe wehurukuro dzinonakidza dzakarumbidzwa naGuillén. Ipapo, mupepeti wedetembo anthology anoongorora rupo rwakaparidzwa naJosé Martí mu Ruva jena.
Haisi diki diki, nekuti Martí anoti mukunyora kwake hunhu hunotsanangura hunhu hwevanhu: ruremekedzo nemhandu.. Gare gare, Torregrosa anosiyanisa nhetembo Hapana munhu ari oga, naAgustín Goytisolo, apo munyori anotsoropodza hunyope hwenyika dzakasimukira. Aya maitiro ega ega ndiwo chinhu chakarambwa naGoytisolo mumitsara yake yekukumbira kune nyika dzese.
Federico García Lorca. Chikamu chevanyanduri mune anthology.
Mazita semidziyo yekutaura muzvinangwa zvakasiyana
Nhetembo yemakumi matatu yakaongororwa naJuan Ramón Torregrosa mukufananidza kwake ndi "Distinto", naJuan Ramón Jiménez. Chinyorwa chino chakadzivirirwa kusiyana kwemadzinza, tsika nechitendero pakati penyika izere nekunyanyisa nekusashivirira. Jiménez anoshandisa mazita akasiyana ezvisikwa (shiri, gomo, mugwagwa, kumuka, rwizi uye murume) mukufananidza kune kuzhinji kwekuratidzwa kwevanhu.
Tevere, mupepeti anokoka kudzidza kwemazita akaiswa naRubén Darío mu "The Wolf Motives." Mazhinji acho mazwi anoreva zvakafanana anoshandiswa kuratidza musiyano uripo pakati pehunhu hwemhuka nehuipi hwevanhu hwamaune. Gare gare, Torregrosa anoenderera mberi nerondedzero pamazita achishandisa fananidzo nemasikirwo anoshandiswa naRafael Alberti mu Rwiyo.
Kufamba kuburikidza nemasikirwo
Sekubatana nemusoro wenyaya wapfuura, Torregrosa anowedzera kutsanangurwa kwake pamazita mu «Romance del Duero», naGerardo Diego. Mudetembo iri munyori anoisa huchenjeri hwehunhu (hunotaurwa semunhu murwizi) pamberi pezvinhu zvinosvibisa anthropogenic. Ichokwadi chinonzwisisika chinoonekwa kuburikidza nepfungwa chinorapwa zvakare mumibvunzo yakamutswa nezve "Ini ndairidza nyere yangu", naJiménez.
Nenzira imwecheteyo, mupepeti anodzokera kunonzvera nharo dzemweya dzinotsanangurwa nemitoo nemazita aripo mu "El poplar nemvura murudo." Nechikonzero ichi, nhetembo yaPedro Salinas inoratidza kukosha kwehupenyu hwemweya kuvanyanduri. Zvino, Torregrosa inobvunza muverengi nezvenzira dzevanyori dzekupa hunhu kuzvinhu zvese (zvakasikwa kana kwete) zvemamiriro avo.
Munyika dzehunyanzvi nekusetsa
Pakutanga kwenyaya iyi, Torregrosa anoti: “Hakuna chinhu kana chokwadi chisingakwanise kuve nhetembo. Zvese zvinoenderana nehungwaru kana kugona kwanyanduri kushandura chinhu chezuva nezuva kana chinosemesa kuita nhetembo, sezvinoitwa naPedro Salinas mu '35 spark plugs '". Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, kuomarara kwechimiro kwatova pachena inyaya yehunyanzvi.
Nechikonzero ichi, mupepeti anotora seanotaura Lope de Vega naiye "Soneto pakarepo" kutsanangura kuoma kwekunyora mune iyi dhizaini ye "ndima-nhetembo". Pamusoro pezvo, Torregrosa inorumbidza kugona kweRamón Gómez de la Serna mu Gregueries. Nekuda kwesimba rake rinoshamisa rekumisikidza hukama hunoshamisa pakati pe - sezviri pachena - zvinhu zvisina kufanana.
Tevere, Torregrosa inotungamira vaverengi kuburikidza nezviitiko zvakagadzirirwa kuona hunhu hwengano yechinyakare. Saizvozvo, nhetembo dzinotorwa sereferenzi Mosi nedzimwe mhuka naTomás de Iriarte uye Kuda kuseka wokwaBaltazar de Alcázar. Nekuti zvinomiririra mienzaniso yakanaka kwazvo yemanyorerwo ezvinyorwa uye nezve chaiyo inodikanwa kana epigram ichizonyorwa, zvichiteerana.
Panzira yezviroto uye zvakavanzika
Pamusoro wekupedzisira wenyaya yake yekufananidzira, Juan Ramón Torregrosa anovimba nemasters makuru ezana ramakore rechiXNUMX Spanish nhetembo. Rwendo urwu runonakidza mukudzika uye kushuvira kwepfungwa dzevanhu kunouya kubva muruoko rwe:
Antonio Machado, «Aive mwana akarota uye Nezuro manheru paakarara».
Federico García Lorca, «Kudanana kwemwedzi, mwedzi».
Juan Ramón Jiménez, «Hupenyu».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Kumuka kwemhepo. Nhetembo Anthology, naJuan Ramón Torregrosa